ရှက်တတ်ရင် ဒီစာကို လုံးဝ မဖတ်လိုက်ပါနဲ့..။ မရှက်တတ်မှ ပုံကိုနှိပ်ပြီး စာကို ဆက်ဖတ်ပါ – MMPost
ရှက်တတ်ရင် ဒီစာကို လုံးဝ မဖတ်လိုက်ပါနဲ့..။ မရှက်တတ်မှ ပုံကိုနှိပ်ပြီး စာကို ဆက်ဖတ်ပါ
နိုင်ငံတကာ March 13, 2018
အနောက်နိုင်ငံတွေကFacebook ဆိုတာကို ထွင်ပေးလိုက်တယ်ဖုန်းဆိုတာကို ထွင်ပေးလိုက်တယ်…ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီမှာ ဒီနေ့အထိ စာအုပ်ဆိုင်တွေ ရာင်းကောင်းတုန်းပဲ.. စာအုပ်စာပေကို ဖတ်ကောင်းတုန်းပဲ ….စာအုပ်တိုက်တွေ အလုပ်ဖြစ်တုန်းပဲ … စာရေးဆရာတွေ အာင်မြင်တုန်းပဲ…ကိုယ်တွေဆီမှာတော့ စာအုပ်ဆိုင်ဆိုတာ အငြိမ်းစားနဲ့ နိုင်ငံခြားသားလောက်လာကြတယ် ။
စာကြည့်တိုက်ဆိုတာ သရဲခြောက်မှာတောင်ကြောက်ရတယ် ။ရပ်ကွက်ထဲက စာအုပ်အငှားဆိုင်လေးတွေ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ဖြစ်ကုန်တယ် ။စာပေထုတ်ဝေရေးတွေ တွက်ခြေမကိုက်လို့ ပိတ်သိမ်းကုန်ကြတယ် ။စာရေးဆရာတွေမှာ နာမည်သာရှိတယ် ။ ချမ်းသာဖို့ဝေးစွ ချာင်လည်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင်…တချို့သော လူငယ်ဆိုသူတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ ။တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖုန်းကို လက်ညှိုးနဲ့ ပွတ်လိုက် လက်မနဲ့ဖိလိုက်၊ ပွတ်ဆွဲလိုက်၊ နှိပ်ထည့်လိုက် ။
အလုပ်မှာလည်း ဒါပဲ စာသင်ခန်းထဲလည်း ဒါပဲ ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်လည်း ဒါပဲ ။အိပ်ယာပေါ်လည်း ဒါပဲ ။ ချေးပါလည်း ဒါပဲ ။ သေးပေါက်လည်း ဒါပဲ ။မိုးလင်းလည်း ဒါပဲ မိုးချုပ်လည်း ဒါပဲ… အတိုင်းအဆ မရှိ ။သတ်မှတ်ချက် မရှိ ။ ကန့်သတ်ချက် မရှိ ။ ဒါပဲ လုပ်နေကြတော့တာ…ဒါကြီးကြည့်ပြီး ပြုံးလိုက် ။ ဒါကြီးကြည့်ပြီး ရယ်လိုက် ။ မဲ့လိုက်၊ ဆဲလိုက် ။
ဟင်ကနဲဖြစ်သွားလိုက် ဟာကနဲဖြစ်သွားလိုက် ။ ဘုရားတလိုက် နဖူးရိုက်လိုက်နဲ့…အွန်လိုင်းသုံးပြီး စာဖတ်တယ် ။ အကျိုးရှိတာ လ့လာတယ်ဆိုသူတွေက တ်ာတော့ကိုရှားလာပါတယ်…မနက်ကကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုလေး ဘာတဲ့ မကြည့်ရသေးရင် ကျနော့် wall မှာရှိသေးတယ် ။သွားကြည့်ကြ အင်တာဗျူးမေးတာ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ဘာမှမသိကြဘူး ။ဘယ်သိမလဲ စာမှမဖတ်ကြတော့တာ ။
အားနေ ဒါပဲပွတ်နေကြတာလေ… ။မြန်မာသက္ကရာဇ်မသိ မြန်မာဒုသမ္မတမသိ မြန်မာ့လူဦးရေမသိ ။ ဒီလောက်အခြေခံတောင် မသိမှတော့သေချာတယ်…သိပ္ပံမောင်ဝ မသိ ၊ မင်းသုဝဏ် မသိ ၊ ။ရွှေဥဒေါင်း မသိ ၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် မသိ ၊ မသန်းတင့် မသိ ၊ဇော်ဂျီ မသိ ၊ ချစ်ဦးညို မသိ ၊ အောင်သင်း မသိ ၊ မင်းလူ မသိ ၊ နီကိုရဲ မသိအီကြာကွေး မသိ ၊ ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း မသိ…အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ် မသိ …. စစ်အေးတိုက်ပွဲ မသိ …. အာရပ်နွေဦး မသိ …ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲ မသိ ….ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်စစ်ပွဲ မသိ…..ငါးရာ့ငါးဆယ် မသိ ….သုံးဆယ့်ရှစ်ဖြာ မသိ ..မဟာဗုဒ္ဓဝင် မသိ ….ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ မသိ…ASEAN မသိ …. UNDP မသိ….UNICEF မသိ….NATO မသိ …OPEC မသိ …. G 20 မသိ ….UNDP မသိ…ဘယ်သိမလဲဗျာ စာမှမဖတ်ကြတော့တာ ၊ ပာပြန်ရင်လည်း ပာတဲ့သူ အလွန် ။ဉာဏ်ပညာနဲ့ နှလုံးသားစွမ်းရည်ဆိုတာ တက္ကသိုလ်တက်ရုံ ဘွဲ့ရရုံ တစ်နှစ် တစ်တန်းအောင်ရုံနဲ့ မရဘူးဗျ ။စာအုပ်စာပေပါ ဖတ်မှရတာ… ဟိုဟာမေးလည်း မသိ ဒီဟာမေးလည်း မသိဆိုမှတော့ သေချာတယ် သူတို့ဟာ မှန်သလား မှားသလား မသိ ။တရားသလား မတရားသလား မသိ ။ သာသလား နာသလား မသိ ။
ထူသလား ပါးသလား မသိ။ချိုသလား ခါးသလား မသိ ။ သင့်သလား မသင့်သလား မသိ ။ တော်သလား ညံ့သလား မသိ ။မသိ မသိ မသိ ….ဘာဆိုဘာမှ မသိ… အင်းးး ….ဒီလောက်တောင် မသိမှတော့ ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူတွေနဲ့ ဒီခရီးကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆက်ကြမလဲဆိုတာ ကိုယ်တွေလည်း မသိငတ်ကြ…။
လိင် ဆက်ဆံသည့်ပုံစံ ကခုန်ခဲ့မှုဖြင့် နိုင်ငံခြားသား ၁၀ ဦးကို ကမ္ဘောဒီးယားရဲ ဖမ်းဆီး
ZawGyiဖြင့်ဖတ်ရန် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံနဲ့ ညစ်ညမ်းစွာ သီဆိုကခုန်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ကမ္ဘောဒီးယားရဲတွေက ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံတွင်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ သွားလာမှုအများဆုံး နေရာတွေမှာ ခုလို အများပြည်သူတွေအတွက် မသင့်တော်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတွေ မပြုလုပ်နိုင်စေဖို့ စီမံချက်အရ …